Ixesha Post: Apr-30-2021
Uyilo lwe-AOOD kunye nokuveliswa komgangatho ophezulu kunye neendleko ezisebenzayo zeeringi zokutyibilika kwamashumi eminyaka. Sihlala siphucula amakhonkco ethu okumgangatho ophakamileyo we-ROV kwaye siphuhlisa iimveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno ezifunwayo. Izisombululo zethu zomsesane wesilayidi zibandakanya amakhonkco esiliphu wombane, ii-FORJs, amalunga ajikelezayo ajikelezayo / ii-swivels okanye c ...Funda ngokugqithisileyo »
Iringi yesiliphu lilungu elijikelezayo elalisetyenziselwa ukunikezela ngoqhakamshelwano lombane ukusuka kwindawo emileyo ukuya kwiqonga elijikelezayo, linokuphucula ukusebenza ngoomatshini, ukwenza lula ukusebenza kwenkqubo kunye nokuphelisa iingcingo ezonakalisayo ezijingayo kumalungu ahambisekayo. Amakhonkco zelanga zisetyenziswa ngokubanzi mobile camera zomoya sy ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni iringi yesiliphu? Iringi yesiliphu sisixhobo esisebenza ngombane esivumela ukujikeleza okungasikelwanga mda kuma-360 ngelixa uhambisa amandla, uphawu, idatha okanye imithombo yeendaba ukusuka kwiqonga elimileyo ukuya kwiqonga elijikelezayo, kubalulekile ukudityaniswa okubumbeneyo okanye umbane wombane kuninzi lolawulo lokuhamba ...Funda ngokugqithisileyo »
Ingcaciso ngeDual Channel High Definition (HD) I-Video Slip Ring ADC24-1U-2SDI
I-AOOD inkcazo ephezulu (HD) amakhonkco esiliphu sevidiyo asetyenziselwa ukuhambisa imiqondiso yevidiyo ye-1080P okanye ye-1080I ye-HD-SDI ukusuka kwisiphelo esimiyo ukuya kwisiphelo esijikelezayo ngelixa ifuna ukujikeleza okungenamda. I-AOOD njengomenzi wamakhonkco othembekileyo wombane, bonelela nge-Ethernet HD isiliphu sesilayidi sesol ...Funda ngokugqithisileyo »
Izisombululo zoJikelo lweeKhamera
Ixesha Post: Dec-18-2020
I-AOOD yitekhnoloji ejolise kwitekhnoloji kunye nentsingiselo esekwe kwislingi kunye nomvelisi wamalungu ajikelezayo. I-AOOD ibonelela ngokudibanisa isirhubhe sesiliphu kunye ne-coax rotary ngokudibeneyo / i-FORJ ukuhlangabezana nemfuno yozinzo, isantya esiphezulu / ukuhanjiswa kwedatha okukhulu kunye nobomi obude bekhamera ehambayo ...Funda ngokugqithisileyo »
Iirobhothi zasekhaya zaba yeyona Ntengiso inkulu yeRobotic yeeSlings Rings
Ixesha Post: Jan-11-2020
Kwisicelo seerobhothi, isilingi esityibilikayo saziwa njengerobhothi ejikelezayo okanye iringi yesilayidi. Isetyenziselwa ukuhambisa uphawu kunye namandla ukusuka kwisakhelo sesiseko ukuya kwiyunithi yolawulo lwengalo yerobhothi. Inamacandelo amabini: indawo enye emileyo ibekwe engalweni yeerobhothi, kwaye enye indawo ejikelezayo inyuka esihlahleni serobhothi. Nge ro ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukuxhathisa ukungqinisisa ukungqinisisa kunye neZinga eliphezulu lobushushu iZisombululo zeSandi
Izixhobo zangaphantsi zifuna umsesane wesiliphu wokuhambisa amandla kunye nedatha kunye nokuphelisa ukujija kwentambo kunye nokudibana kwiindawo ezibi kakhulu. I-AOOD njengomyili oyintloko kunye nomvelisi wamasongo esiliphu yombane, uhlala egxile kwimfuno yamvanje yezixhobo zokomba ezantsi kweeringi, beku ...Funda ngokugqithisileyo »
Imveliso eNtsha isungulwe
Kunye neemfuno ezandayo zamasango amajelo enkcazo ephezulu yesilayidi sevidyo kwizixhobo ze-1080P ze-HD, i-AOOD iphuhlise iindlela ezintsha ezingama-36 ze-HD-SDI slip ring ADC36-SDI. Le modeli enobubanzi obungaphandle obungama-22mm kunye nobude obungu-70mm kuphela, iyakwazi ukuhambisa iindlela ezingama-36 zemiqondiso / amandla kunye nendlela eyi-1 yokujikeleza kwe-RF.Funda ngokugqithisileyo »
"Imisesane yeziXhobo zoMbane" VS "Izihlanganisi ezijikelezayo zombane"
Xa abathengi bekhetha iringi yesiliphu efuna ukusebenza ngesantya esiphezulu, ukuhanjiswa okuphezulu okwangoku kunye nexesha elide lokuphila, kunokwenzeka ukuba bakhethe iringi yesilayidi yemercury, ekwabizwa ngokuba kukujikeleza kwesidibanisi sombane okanye isalingi esinebrashi esingaxineneyo. Isinxibelelanisi esijikelezayo sombane senza usasazo olufanayo lokuhambisa ...Funda ngokugqithisileyo »
Isebenza njani iRingi yeSlip yokuKhangela kwiNkqubo ye-Antenna
Kukho imfuno ekhulayo yeenkqubo zonxibelelwano ze-broadband kwiindlela ezahlukeneyo zamaqonga ahambayo, umzekelo, iinqanawa zaselwandle, izithuthi zomhlaba kunye neenqwelo moya. Ngasinye kwezi zixhobo zokuxhobisa kwangaphambili zixhotyiswe ngeradar enye okanye nangaphezulu, kwaye radar nganye inenkqubo eyahlukileyo ye-eriyali, eqhuba ngoomatshini ...Funda ngokugqithisileyo »
Umqhubi weSlip Ring yeNdibano esetyenziswa kwizixhobo zeLebhu
Iringi yesilayidi yomqhubi njengombane ojikelezayo wombane ovumela ukuhanjiswa kwamandla kunye nomqondiso ukusuka kwindawo emileyo ukuya kwiqonga elijikelezayo, inokusetyenziswa kuyo nayiphi na inkqubo ye-elektroniki efuna ukulawulwa okungalawulekiyo, okungaphakathi okanye okuqhubekayo ngelixa uhambisa amandla kunye / okanye idatha. ..Funda ngokugqithisileyo »
Imarike yomoya ephendulwa yiTurbine Towers Qhubeka nokukhula
Uphando olutsha lubonisa ukuba amandla omoya ayaqhubeka ukuba ngumthombo wamandla avuselelekayo kwilizwe lonke, kunye neemarike zeeturbine zomoya ekulindeleke ukuba zonyuke zisuka kwi-12.1 yezigidigidi ngo-2013 ziye kwi-19.3 yezigidigidi nge-2020, izinga lokukhula ngonyaka le-6.9 yepesenti. Ngokwengxelo entsha evela kuphando kunye nokubonisana ...Funda ngokugqithisileyo »